ब्लग परामर्श | सडकको लागि एक युगल
तपाईं आफ्नो बोसिङ बन्न पुग्नुहुन्छ?
विश्वमा कुनै पनि व्यक्तिको काम गर्न चाहानुहुन्छ?
तपाइँका नियमहरूमा बाँच्न तयार हुनुहुन्छ?
मलाई अनुमान दिनुहोस् ...
तपाईं यसलाई आफ्नो ब्लग मा पीस गर्दै हुनुहुन्छ, एक घण्टा खर्च। अब सम्म यो तपाईंलाई कहीं पनि नहीं मिलिरहेको छ।
तपाईंको ब्लग पोस्टहरू राम्रो छन्, तपाईंको डिजाइन राम्रो छ, र तपाईं सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक ठाउँ हुनुहुन्छ, तर सुई बढिरहेको छैन।
प्रत्येक प्रश्नको लागि तपाईसँग छ, त्यहाँ 1,000 गुरुङ छन् तपाइँलाई विरोध सल्लाह दिँदै, सबैले अरुलाई थाहा छ भन्ने कुरा अरु मान्छेले गर्दैनन्।
तपाईं कसरी हुनुहुन्छ भन्ने एक ब्रान्ड कसरी निर्माण गर्नेमा हराएको महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईंले पठाउनु भएको सन्देश, र तपाईंको ब्लग को एक गंभीर आय को साथ प्रदान गर्दछ।
तपाईं चाहनुहुन्छ, एक पटक र सबैको लागि, कसैलाई छोटो काट्न र तपाईलाई कसरी सच्याइएको छ भनेर बताउनुहुन्छ। तिमीले चाहन्छौ तपाइको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस। तिमीले चाहन्छौ स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको पेटमा कहीं तपाईंलाई थाहा छ यो गर्न सकिन्छ, र तपाईलाई थाहा छ तिमीले यो गर्न सक्छौ। तपाईलाई थाहा छैन कहाँ सुरु हुन्छ.
तपाईको यातायात फास्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ब्रान्डको लागि नाम हजारौं जोडिएको अनुयायीहरूलाई तपाइँको ब्लगमा हरेक महिना ड्राइभ गरेर प्रेम तपाईंको सामग्री।
रथ रेसबाट मुक्त तोड्नुहोस्, र आफ्नै आफ्नै तालिका सेट गर्नुहोस्। अनलाइन पैसा बनाउन सजिलो राम्रो छैन, र यो तपाईं केहि गर्न सक्नुहुनेछ!
जो काम गर्दछ मा फोकस
धेरै ब्लगरकर्ताले साता नगर्ने भित्री मेट्रिक्समा वर्ष बर्बाद गर्छन्। के निर्माण गर्न के गर्न सकिन्छ व्यवसाय - ठीक बाट सुरु
एअरहेयरबाट काम गर्नुहोस्
जब छान्नुहोस्, जहाँ, र तपाइँ कसरी आफ्नो व्यवसायलाई सम्भाल्नुहुन्छ। आफ्नै नियमहरू सेट गर्नुहोस्। यो तपाईंको बाटो हो। आफ्नै जीवन लाइभ गर्नुहोस्।
हामीले 2016 मा ब्लगिंग सुरू गरे, र त्यस पछि देखि हामी एक मजा र लाभदायक व्यवसाय हो जो हामिलाई प्यार गर्छन, दुनिया को यात्रा गर्न को लागी अनुमति दिछन - र तिर्नुहोस।
हामीले पर्यटन बोर्डहरू, अनलाइन मिडिया एजेन्सीहरू, ठूला कर्पोरेट यात्रा मिडिया र विश्वभरि विभिन्न भ्रमण गर्ने कम्पनीहरूसँग काम गरेका छौं।
हामीले के सिकेका छौं प्रयोग गर्दै, हामीले दसौं ब्लगरहरूको लागि सिकाउने वक्रलाई छोटो अनलाइन खोज, ब्रान्ड, र व्यापारको निर्माण गर्ने स्मार्ट तरिका खोज्छौं। हाम्रा विद्यार्थीहरू ब्लगिंग ल्यान्डस्केपबाट आउनु हुन्छ - यात्रा र पाकबाट वित्त, स्वयं सहायता र थपबाट! यो तपाईंको ब्लग बारेमा के होईन कुरा गर्दैन - एक सफल ब्लग निर्माण गर्ने सिद्धान्तहरू एकै हुन्, र हामी यहाँ यी सिद्धान्तहरू सिध्याउन यहाँ छौं!
तपाईंलाई आवश्यक छैन
हामीले हाम्रो ब्लगलाई WordPress, ब्लगिंग, वा अनलाइन मार्केटिंगको बारे केही पनि थाहा पायौं। हामीले स्क्वायर एकबाट शुरु गरे जस्तै, तपाई जस्तै - र तपाईलाई यो सफलता पाउँदछ।
रिको हुनु पर्छ
हामीले हाम्रो ब्लग अनलाइन होस्टिंग को लागी केवल केहि डलर को छाती बजेट संग शुरू गर्यो। तपाईंलाई धनी बनाउन सफल ब्लग निर्माण गर्न धनी हुन आवश्यक छैन - तपाईलाई मात्र सफलताको कुञ्जीहरू जान्न आवश्यक छ!
तपाईंले एक सुखी सामग्री क्रिएटर हुन आवश्यक छैन
कथाको साथ जो कोहीले त्यो कथा बताउने अवसर छ, र यदि तपाइँसँग लेखक, फोटोग्राफर, वा ब्लगिंग गुरुको रूपमा अनुभव छैन भने यसले कुनै कुरा गर्दैन।
यो अर्थ छैन कि "स्वतन्त्रता" को कामले तपाईंलाई यो बनाउनको लागि सुरक्षा दिन आवश्यक छ, के हो? एक व्यवसायको निर्माण घरमा हुन सक्छ, तपाईंको खाली समयमा - जब पनि तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ।
सच्चाई हो, तपाईं साल (जस्तै जस्तै गर्नुभयो) खर्च गर्न सक्छ खुसी जानकारी को माध्यम ले नुहाउन को माध्यम ले अनलाइन स्रोतहरु को विपरीत। - र अन्ततः कहीं पनि कभी नहीं। तपाईं लेख मार्फत सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडीयो हेर्नुहोस्, पुस्तकहरू किन्नुहोस्, र हामीले गरेका सबै कुराहरू गरौं र सम्भवतः, केवल हुनसक्छ यो बाहिर आंकडा। अधिकांश मानिसहरू पहिले छोडेर सोचिरहेका छन् कि एक सफल अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सपना भनेको केहि हो कि उनीहरूको लागि बाहिर काटिएको छैन।
हामी जान्दछौं, किनकि हामी धेरै चोटि छोड्यौं।
बरु, हाम्रो दृष्टिकोण सरल छ। हामी कुन कामहरूमा फोकस गर्छौं, र भित्ता मेट्रिक्स जस्तै चीजहरूको आवाज काट्छ, केवल यातायातको लागि गलत ट्राफिक चलाउन र साइट डिजाईनको बारेमा जुनसुकै छ। हामी त्यो सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्छौं काम - ती व्यक्तिहरूले "राम्रो ब्लगहरू" जुन कन्वर्ट गर्दैनन्, ट्राफिक ड्राइभ नगर्नुहोस्, र तपाईंको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्दैन।
यो तपाईं कुनै ब्लगिङ यात्रामा जहाँ फरक हुनुहुन्न - चाहे तपाइँ मात्र सुरू गर्न सोच्नु हुन्छ, वा बिना बिना सफलताको लागि ह्याकिंग गरिरहनुभएको छ। हामी स्केलेबल हुने आधार निर्माण गर्न फोकस गर्न जाँदैछौं, र तपाईंको ब्लग र तपाईंको व्यवसायको विकासमा छिटो मद्दत गर्न मद्दत गर्दछौं।
रोक्न विचार गर्नुहोस्। रोक्न समय। START भवन वास्तविक सफलता
सँगसँगै काम गर्न तयार हुनुहुन्छ?
SKYPE BLOGGING परामर्श:
हाम्रो घण्टा-लामो परामर्शहरू स्काइप वा जुम (जुन जुन तपाइँले मनपर्छ) मा काम गर्दछ, र खुला ढाँचा हो। तपाईंले तपाईसँग प्रश्नहरू ल्याउनु भएको छ, तपाईलाई कठिनाइ हुने समस्याहरू, र हामी तपाईंको साथमा प्रत्यक्ष रूपमा डुङ्गा गर्नेछौं तपाईंको ब्लगलाई सही ट्रयाकमा प्राप्त गर्न! हामीले सम्भावित केही सम्भावित शीर्षकहरू:
एक व्यवसाय नाम समर्थन गर्न सक्षम स्केलेबल र एक ब्लग नाम र ब्रान्ड सिर्जना गर्दै (तपाइँले थाहा पाउनुभयो कि तपाइँको नाम तपाइँले पनि सुरु गर्नु अघि तपाइँको मौनहरू हड्ताल गर्न सक्दछ?)
एक आला परिभाषित गर्दछ जसले तपाईंलाई सफलतापूर्वक सफलता पाउन मद्दत गर्दछ
सफलताको लागि सडक नक्सा सिर्जना गर्दै - एक दिनबाट सुरू गर्न, वा जहाँबाट तपाईं आफ्नो ब्लगिंग यात्रामा हुनुहुन्छ। हामी 30 दिनहरू, 90 दिनहरू,6महिनाहरू, एक वर्ष, र अझ लामो समयसम्म भ्रमण गर्न सफलताको लागि हिट गर्नको लागि तपाईंलाई चिन्ह चिन्हहरू हेर्न सक्नुहुन्छ!
ट्राफिक ड्राइभ गर्ने विषयहरू र किवर्डहरू खोज्दै
तपाईंको पाठकहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा राख्ने तरिकामा लेखिएको छ
उपकरणहरू खोज्ने जो तपाईंको शिक्षा वक्र छोटो छ
सामाजिक सञ्जाललाई एक तरिकामा महसुस गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण छ, र न केवल विनाश मेट्रिक्स मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ
फेसबुक विज्ञापनहरू कसरी मास्टर गर्ने?
तपाईंको ब्लग मुद्रीकरण गर्दै
तपाईंको ब्लग मा एक विधिशास्त्र को निर्माण गर्न को लागी तपाईंको दीर्घकालिक मा वृद्धि को लागि आय मा मदद गर्दछ
बिक्री र मार्केटिंगको सिद्धान्तहरू महसुस गर्दै
सबै निजी परामर्श विकल्पहरूमा 7-दिन 100% पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी समावेश छ यदि तपाइँ सत्रसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने।
इन्टरनेट ब्लग कन्सुलेशन
(MIIMI - ONLY) मा: $ 1,000
दक्षिण फ्लोरिडामा लाइभ गर्नुहोस्, वा चाँडै यहाँ यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ? हामी साइड-द्वारा-साइड र तपाईंको ब्लगमा काम गर्छौं जब डाइविंग तपाईसँग कुनै पनि समस्यामा गहिरो हुन्छ - तपाईले अनुभव गर्नुभएका कुनै पनि प्राविधिक समस्याहरू सहित। हामी निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइट ले अफको लागि तयार छ, र तपाईंलाई एक सडक नक्शा दिन्छ जसले एक्सेलमा मद्दत गर्नेछ!
यसमा साइन-इन समयको4घण्टा, साथै स्काइम वा जूम मार्फत 30-मिनेट पछाडिको समावेश गर्दछ।